ေ မာ င် မိုးသူ မြ န် မာ ပြ န် သ ည် – ရှ က် ပြီးေ သ တဲ့ သင်္ဘော( အ ပို င်း– ၃ ) | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၂ (ဖေဖော်ဝါရီ) ၂၀၁၅ မှ စတင်ဖော်ပြနေသည့် မိုးမခဘာသာပြန်ဝတ္ထုတိုကဏ္ဍတွင် အခန်းဆက်ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာ ပရိတ်သတ်များအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ သည်။
စစချင်းပဲ ဟော်စကင်က အလုပ်အကိုင်အကုန်လုံးကို တာဝန်ယူရတယ်။ ကျုပ်ကတော့ လခစားဝန်ထမ်းပေါ့ဗျာ။ အဲ တခု တော့ရှိတယ်။ အလုပ်အကိုင် ရလဒ်အကျိုးအမြတ်အပေါ်မှာ ကော်မရှင်ရမယ်လို့ ပြောထားပါ့။ ဟော်စကင်က စာရင်းအားလုံး ကိုင်တယ်။ အလုပ်အကိုင်ကုန်ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုလည်း တာဝန်ယူရတယ်။ ကျုပ်ကလည်း ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးဆိုပြီး နေလိုက်တာ။ စစချင်းပဲ ကျုပ်အပေါ်မှာ ကုန်သွယ်ရေး အခေါက်ခေါက်လုပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ဝင်ငွေတွေ များများနဲ့ မြန်မြန်ရပါတယ်။
“လူတွေ ဘာလိုချင်ဆုံး ကုန်ပစ္စည်းဆိုတာ စဉ်းစားရတယ်။ ကျုပ်တို့အလိုချင်ဆုံးပစ္စည်းကို ကျုပ်တို့ကရှာဖွေပြီး သူတို့လက် ထဲထည့်ပေးတယ် အဲဒါကျုပ်တို့အလုပ်ပဲဗျ”
ဟော်စကင်ပြောတဲ့အတိုင်းလဲ ဟုတ်ပေသားပဲ။ လူတွေလိုချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို ကျုပ်တို့က ရှာဖွေသယ်ဆောင်ပေးတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရလို့ လူတွေကလည်းပျော်ကြတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ မှောင်ခိုလုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် လေးစား လောက်တဲ့ မှောင်ခိုသမားပေါ့ဗျာ။
ကျုပ်တို့ရဲ့ ပထမပိုင်းအခေါက်တွေမှာ အဓိကကုန်ပစ္စည်းကတော့ ပြင်သစ်ကထွက်တဲ့ ဘရန်ဒီနဲ့ ဝိုင်ပေါ့ဗျာ။ နိုင်လွန်ချည် အိတ်တွေလည်းပါတယ်။ ဆီဗူးသွတ်ကုန်တွေလည်းပါတယ်။ စီးကရက်တွေလည်းပါတယ်။ ကဲ အားလုံးတော့ မှောင်ခို ပစ္စည်း အသေးစားတွေပေါ့။ ရောင်းသူရော ဝယ်သူရော စိတ်ချမ်းသာကြတယ်။ ကျုပ်တို့ကလည်း ဝင်ငွေတွေအများကြီးရတယ်။
ဟော်စကင်မှာ အင်္ဂလန်ကအဆက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ထိုနည်းအတူပဲ ပြင်သစ်ဘက်မှာလည်း အဆက်တွေအများကြီး ရှိတယ်။ အဲဒါတော့ ကျုပ်အသေအချာသိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အသေးစိတ်တွေကိုတော့ မေးစရာမလိုဘူးလို့သတ်မှတ်ပြီး မမေးခဲ့ပါဘူး၊ သူက ကုန်ပစ္စည်း အဝယ်အရောင်းတွေ တာဝန်ယူတယ်။ ကျုပ်က ရေလက်ကြားကို ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်ဖြတ်ပြီး သင်္ဘောမောင်းပေးရတယ်၊ ကျုပ်ရဲ့သင်္ဘောအင်ဂျင်စက်တွေကလဲကောင်း ကျုပ်ကလည်း ဒီရေလမ်းကြောင်းကိုပိုင်ဆိုတော့ အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့နေတာပေါ့။
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်တာဝန်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေတော့ ရှိတယ်ပေါ့။ ကျုပ် ဥပမာတစ်ခုပြော ပြမယ် နံနက် ၄ နာရီ ချာပေါ့ရေနက်ဆိပ်ကမ်းက လန်မင်တန်မြစ်ထဲအဝင်မှာ ရောက်နေတယ်။ ဆိပ်ကမ်းမှာတော့ မီးထွန်း ထားတွေရှိပါတယ်။ ကျုပ်တို့ MGB1087 ကတော့ မီးမဖွင့်ပဲ မှောင်နဲ့မည်းမည်းထဲမှာလည်း အလင်းရောင်မပြူခင် ဆိပ်ကမ်း ကို ရောက်အောင်ကြိုးစားရတာကို၊ စစ်အတွင်းတုန်းကတော့ ရေလက်ကြားကို စုန်ဆန်ကူးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့် အချိန်တုန်းက တော့ အမြဲတန်းဂရုစိုက်ရတာ ရန်သူဂျာမန်သင်္ဘောတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့်… အခုတော့…။
ကျုပ်တို့သင်္ဘောက မြစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကွေ့ကို ရောက်နေပြီဗျ။ ဒီကွေ့ကျော်ရင် ဆိပ်ခံတွေနဲ့တွေ့ပြီပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရုတ်တရက် ဆလိုက်မီးတခုထွန်းလာပြီး ရှေ့ကမော်တော်စက်ရပ်လိုက်ဆိုတဲ့ လော်စပီကာနဲ့အသံကြားရတယ်။ ကျုပ်က အလိုအလျောက်ပဲ ထိပ်တိုက်မတိုးမိအောင် ကွေ့ရှောင်လိုက်တယ်။ ကွေ့ရှောင်ပြီး အမှောင်ထုထဲ တိုးဝင်လိုက်တယ်။ နောက်က ဆလိုက်မီးက လိုက်တုန်းပဲ။ ဟော်စကင်ကလည်း လေသံတိုးတိုးနဲ့ …
“သင်္ဘောကိုဆက်သွား သူတို့က ကမ်းခြေစောင့်သင်္ဘောနဲ့တူတယ်ကွ။ ပြီးမှ ကမ်းတဖက်ဖက်ကိုကပ်လိုက်”
ကျုပ်လည်း ကမ်းခြေတခုမှာကပ်ပြီး အင်ဂျင်စက်သတ်လိုက်တယ်။ ကျုပ်တို့သင်္ဘောဟာ ကမ်းခြေက နွံတောထဲမှာရပ် သွား တယ်။
ဟော်စကင်က ဆလိုက်မီးထိုးတဲ့ဆီကိုကြည့်ပြီး လှမ်းအော်တယ်။
“ဘာကောင်တွေလဲကွ မီးထိုးပြီး အရမ်းမောင်းလာကြတာ”
တဖက်ကလည်း လေသံမာမာနဲ့ …
သင်္ဘောပေါ်တတ်လာတာက နှစ်ယောက်ဗျ။ တစ်ယောက်ကငယ်ငယ်၊ တစ်ယောက်က ကြီးကြီး။ နှစ်ယောက်စလုံးက တာဝန်ရှိတဲ့ ပုံပန်းတွေပဲ။ ကျုပ်လည်း မီးစင်ကြည့်ပြီး ကရတော့တာပေါ့။ သူတို့နှစ်ယောက်သင်္ဘောပေါ်ရောက်လာတာနဲ့ တပြိုင်တည်း ကျုပ်က …
“ဘာတွေလဲဗျ ခင်များတို့ကိုရှောင်ရတာနဲ့ ကျုပ်တို့သင်္ဘော နွံပေါ်နစ်ပြီး တင်သွားပြီ”
တတ်လာတဲ့ လူငယ်ငယ်က ..
“ဒါက ပြသနာမရှိပါဘူး။ ဒီရေတတ်လာချိန်ကြရင် ပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်”
“အဲဒါကပြသနာမဟုတ်ဖူး ဆလိုက်မီးက ဘာလို့ထွန်းတာတုန်း”
ဟော်စကင်ကဝင်ပြီး အံ့အားသင့်တဲ့လေသံနဲ့ …
“ ဒို့က လာမင်တန်ကမဟုတ်ဖူး မင်းတို့ရဲ့ မှတ်တမ်းစာရင်းပြ”
အားလုံးရုတ်တရက်တော့ ငြိမ်သွားကြတယ်။ တက်လာတဲ့ အရာရှိနှစ်ယောက်က ကျုပ်တို့သင်္ဘောရဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ကြည့်ကြတယ်။ ကံအားလျော်စွာပဲ သင်္ဘောမှတ်တမ်းက ၁ နာရီတိုင်း အပြည့်စုံရေးထားတာဖြစ်တယ်။ စစ်အတွင်းကရခဲ့တဲ့ အလေ့အကျင့်အတိုင်းပေါ့။ အခုတော့ အကျိုးအမြတ်ရနေပြီဟု မှတ်တမ်းကိုကြည့်ရင် ဘာမှလွှဲစရာမရှိဘူး။ ကျုပ်တို့မှာ အထွက် အဝင် စားရွက်စာတမ်းတွေ အပြည့်အစုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟော်စကင်လည်း ကျုပ်နည်းတူ လည်ပင်းမှာ တစ်ဆို့ဆို့ နဲ့ဖြစ်နေပုံပဲ။ ပြဿနာဖြစ်ရင်တော့ ငါးပါးမှောက်ပြီပေါ့။ လူငယ်ငယ်က …
“ခင်များတို့က ချားပေါက်ဆိပ်ကမ်းဘက်ကလာကြတာကို ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ကြာကြာကြီးမှ ဝင်လာရတာတုန်း”
“ကျုပ်တို့ လမ်းမှာကြာနေလို့ပါဗျာ။ မြစ်ဝမှာ ကျောက်ချပြီးနေရင်တော့ အရသား။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့ကလည်း မစောင့်ချင် တာနဲ့”
ဟော်စကင်က မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ….
“ဖြူးက ပြသနာဖြစ်နေလို့ပါဗျ။ ကျနော်မှားပါတယ် ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကဲပါဗျာ အားလုံး ဦးခန်းထဲဝင်ပြီး အေးအေး ဆေးဆေးပြောပါဗျာ။ အပြင်မှာက အေးပါတယ်”
အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ဟော်စကင်က ကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရမှာပေါ့။ ကျုပ်တို့လေးယောက် စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီးတာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘရန်နီတလုံးကို ဖွင့်ပြီး မျက်စိမှတ်ပြရင်း …
“ဒီဘရန်ဒီက အကောက်ခွန် မဆောင်ရသေးဘူးဗျ”
ပြောပြောဆိုဆို ဟော်စကင်က ဖန်ခွက်လေးခွက်ထဲကို ဘရန်ဒီအပြည့်ထည့်လိုက်တယ်။ စကားဝိုင်းစတာနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် ကလည်း စစ်ပြန်တွေဆိုတာ သေချာသွားတာပေါ့။ ဒါနဲ့ စစ်အတွင်းကာလက အကြာင်းတွေကို စမြုပ်ပြန်ကြတယ်။ ပြီးတော့ တဆက်တည်းလိုပဲ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ကျုပ်တို့ NAVY စစ်ပြန်တော်တော်များများဟာ နောက် ဆုံးပေါ် အကောက်ခွန်မဲ့စီးကရက်တွေ မှောင်ခိုလုပ်နေရတဲ့အကြောင်းပေါ့။
အကောက်ခွန် အရာရှိနှစ်ယောက်ဟာ သံသယရှိနေတာတော့ သေချာတယ်ဗျ။ သူတို့ကိုကြည့်တာနဲ့ အသေအချာ သိနိုင် တာပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ကြည့်ရတာ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖြစ်ပြီး သူတို့အလုပ်မှာ ကျွမ်းကျင်တယ်။ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ဖျက်ဆီးလို့လည်းမရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟော်စကင် စကားရော ဖောရော အနေအထားကြည့်ပြီး သက်သာလိုသက်သာရာ ရ မလားလို့ အတွေးတစ်ခုဝင်လာပါတယ်။
အဲဒီအတွေးကလည်း ကြာကြာမခံဘူးဗျ။ ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောကြရင်း ကျုပ်က ချွေးပြန်လာတယ်။ အကောက်ခွန်အရာရှိ ဝန် ထမ်းနှစ်ယောက်က သင်္ဘောပေါ်ကို လှည့်ကြည့်ကြမယ်လို့ ခဏကြာရင် သင်္ဘောပေါ်ရှာကြည့်မယ်လို့ ပြောတော့မှာ၊ ကျုပ်တို့သင်္ဘောပေါ်မှာလည်း ဒိန်းမက်နိုင်ငံမှ စီးကရက်တွေက အများကြီး၊ ပြီးတော့ ပိတ်စတွေကအများကြီး၊ ဝိုင်ပုလင်း တွေရော အရက်ပုလင်းတွေရော အများကြီးဗျ။ ကျုပ်တို့ကလည်း လွတ်ပါများတော့ ပေါ့တီးပေါ့စနေလာမိတယ်။ ကျုပ်က တော့ တဖြည်းဖြည်း ချွေးပြန်သထက်ပြန်လာတယ်။
စကားဝိုင်းနဲ့ အရက်ဝိုင်းက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝိုင်းသိမ်းရမယ့် အခြေအနေကို ရောက်လာသည်။ နယ်အကောက်ခွန်သမားက ဘရန်ဒီပုလင်းနဲ့ စီးကရက်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး မေးတယ်။
ဗြိတိသျှအကောက်ခွန်သမားတွေက မလွယ်ပါလား။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဟော်စကင်က ထိုင်ရာမှထပြီး …
“ကျုပ်ကို ခဏခွင့်ပြုကြဗျာ အပေါ့သွားချင်လို့”
ပြောပြောဆိုဆို ဟော်စကင်က ရေအိမ်အခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်။ သူထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်ထဲ တခန်းလုံးဟာ ငြိမ်ကျသွား တာပဲ။ ကျုပ်က ဘရန်ဒီတွေ သောက်ထားပေမယ့် အာခေါင်က ခြောက်နေတယ်။ ခဏအကြာ ဟော်စကင်ပြန်ဝင်လာပြီး ကျုပ်ကိုမကြည့်ပဲ အကောက်ခွန်အရာရှိငယ်ကိုကြည့်ပြီး …
အကောက်ခွန် အရာရှိငယ်က ခေါင်းညိမ့်ပြပြီးထွက်သွားတယ်။ ပါးစပ်ကလဲ ပြောသေး … အငယ်လူထွက်သွားတာနဲ့ အကြီး လူက ထိုင်ရာမှထတယ်။ သူက …
“ကျုပ်တို့မသွားခင် သင်္ဘောပေါ်တော့ ကြည့်သွားအုံးမှထင်တယ်”
“ဘုရားရေ ကျုပ်တို့သင်္ဘော ရေတွေဝင်နေပါရော့လား”
ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ ရေတွေကတကယ်ပဲ အခန်းထဲထိဝင်လာပြီကို။ ကျုပ်တို့ခြေထောက်တွေတောင် စိုကုန်ပြီ။ ဟော်စကင်က …
“ကျုပ်တို့သင်္ဘော နွံထဲကိုထိုးရပ်လိုက်လို့ ရေတွေဝင်လာတာပဲဖြစ်မယ်”
တဆက်တည်း အကောက်ခွန်အရာရှိတွေဘက်လှည့်ပြီး …
“ကဲလူကြီးမင်းတို့လည်း အပေါ်တက်ကြဗျို့ ရေဝင်လာတာ အတော်ဆိုးတယ်”
ကျုပ်တို့အားလုံး အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ။ ဟော်စကင်က
“အခုပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ ကျုပ်တိုိ့ဒီမှာ တစ်ညအိပ်ရမှာပဲ။ မနက်ရောက်မှပဲ ရေတွေစုပ်ထုတ်လို့ကုန်မှာ”
“ဒီလိုရေတွေဝင်နေလို့ ခင်များတို့ အဆင်ပြေကြရဲ့လား။ ကျုပ်တို့ ဘာကူလုပ်ပေးရအုံးမလဲ”
“ရပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူတင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ပါသာကျုပ်တို့ အချိန်မီလုပ်နိုင်မှာပါ”
အကောက်ခွန်အရာရှိကြီးဟာ ကျုပ်တို့ကို နှုတ်ဆက်တောင်းပန်စကားပြောပြီး သူတို့ရဲ့ အကောက်ခွန်သင်္ဘောပေါ်ပြန်တက် ထွက်သွားပါတော့တယ်။ အကောက်ခွန် အရာရှိနှစ်ယောက်ထွက်သွားမှ ကျုပ်က ကျုပ်နဖူးကို ကျုပ်ရိုက်ပြီး ကံကောင်းပေ လို့ပေါ့ကွာ။ ဟော့စကင်က …
“ဘယ်အခြေအနေမှာပဲ ရောက်ရောက် ခေါင်းအေးအေးထားပြီး အဖြေရှာတတ်ရတယ်ဗျ”
ဟော်စကင်က ကျုပ်ကို ကလေးတယောက်လို သင်ကြားပေးလာမှ သင်္ဘောထဲရေဝင်လာတဲ့စနက်ဟာ ဟော်စကင်ကိုယ် တိုင်က လုပ်လိုက်တာမှန်း ကျုပ်ရိပ်မိပါတော့တယ်။
ကျုပ်တို့အလုပ်မှာ ဟော်စကင်က စီးပွားလုပ်ငန်း အရပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူတယ်။ ၄ လတာ ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းအတွက် ကျုပ်ရဲ့ ဘဏ်စာရင်းမှာ ဒေါ်လာပေါင်း သုံးထောင်လောက်ရောက်လာတယ်။ တလ တလ ပေါင်လေးရာကျော် တင်တဲ့သဘောပေါ့ ကျုပ်ရဲ့ ဘဏ်စာရင်းဝင်ငွေ တိုးလာတာနဲ့အမျှ ကျုပ်တို့ရဲ့မှောင်ခိုလုပ်ငန်း တိုးချဲ့လာတာလည်း သတိထားမိတယ်၊ လုပ်ငန်း စခါစကလို စီးကရက်တွေ၊ ဘရန်ဒီတွေ၊ နိုင်လွန်တွေလောက်နဲ့သာ မကချင်တော့ဘူး။ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ကျုပ်တို့ သယ် ဆောင်ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ တဖြည်းဖြည်း သံသယစိတ်တွေဝင်လာတာ အမှန်ပါပဲ။
အဲဒီလိုဖြစ်ရတာလည်း အင်္ဂလန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြင်သစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေလာယူတဲ့လူတွေရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် မျက်နှာထိ မျက်နှာထားတွေကြောင့်ပဲပေါ့။ ဒီလူတွေကိုကြည့်ရတာ အရက်၊ စီးကရက်၊ မှောင်ခိုသမားအဆင့် မကချင်ဘူးဗျ။ သူတို့တင်လာတဲ့ ကုန်သတ္တာတွေကလည်း ဟန်ပြတံဆိပ်တွေကပ်ထားပေမယ့် ကြည့်ရတာ လက်နက်သတ္တာတွေ ဖြစ်ပုံရ တယ်။ ကျုပ်ကလည်း စစ်သားဟောင်းပဲဗျ၊ ရိပ်မိတာပေါ့။ အဲဒီကုန်သတ္တာတွေဟာ ပါရီက ဝိုင်ကုန်သည်တယောက်ပို့တာ သတ္တာတိုင်းမှာတော့ တကယ့်အစစ်အမှန် တံဆိပ်ကပ်ထားလေရဲ့။ တံဆိပ်က “ဂျွန်ဟစ် စကော့ဝီစကီ” လို့ ပါတယ်။
ကျုပ်က ကန့်ကွက်ပါသေးတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့ မဟုတ်ဖူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်ကဒီအလုပ်ထဲမှာ လည်ပင်း ထိရောက်အောင် နစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ကျုပ်ဘဏ်စာရင်းမှာ တနေ့တခြား တိုးလာတာကိုလည်း ကျုပ်က ကျေနပ်နေရတာပေါ့၊
ဟော့စကင်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ပြောပါတယ်။
“အခုကျုပ်တို့အခြေအနေက ငွေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ အပြန်အလှန်လုပ်နေကြတာ နှစ်ခုစလုံးရဲ့ပမာဏကလည်း ကြီးသ ထက်ကြီးလာနေပြီ။ ဒီတာဝန်တွေအားလုံး ကျုပ်ကိုပဲလွှဲထားပါဗျာ”
ဒါနဲ့ပဲ ကျုပ်ကလည်း သူ့ကိုပဲ လွှဲထားလိုက်တော့တာပါပဲ။ တခါတလေ ကန့်ကွက်ဖို့ အကြောင်းပေါ်လာရင်လည်း ပြဿနာအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုုင်ရပြီး ကန့်ကွက်ရမယ့်ကိစ္စက မှေးမိန်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်။
အဲဒီအချိန်ကာလ အတောအတွင်းမှာပဲ ကျုပ်သတိထားမိတာ တခုရှိလာတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျုပ်ရဲ့သင်္ဘော MGB1087 ပေါ့ဗျာ။ ဒီကောင်မကြီးက ဟိုးရှေးတုန်းကလို မဟုတ်ချင်တော့ဘူးဗျ။ nyo.min@gmail.com
ပြသနာ သေးသေးလေးနဲ့ စပြတာပဲ။ ထုံစံအတိုင်း ကောင်းနေရမယ့်ကိစ္စတွေ တကယ်တော့ မကောင်းတော့ဘူး ဖြစ်နေ တာမျိုးပေါ့။ တခါတော့ ပလပ်ထဲ ဆီဝင်တဲ့ကိစ္စပေါ့။ ပလပ်ထဲဆီဝင်ရင် သိတဲ့အတိုင်းပဲ အင်ဂျင်စက်က ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဆိုးနေသလိုပဲ။ ကာလေဆိပ်ကမ်းကအပြန် တလျှောက်လုံးဖြစ်နေခဲ့တာ။ တခါလည်း စ်ိန်မာလိုနဲ့ ဒစ်နက်အကြားမှာ ပဲ့ကိုင် စနစ်က ပျက်သွားပါလေရောဗျာ။ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရနဲ့ ကမ်းကပ်ရတော့မယ့်အခြေအနေထိ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ တခါလည်း ကျုပ်တို့အလုပ်က ညအမှောင် ၆ နာရီအတွင်း တနေရာနှင့်တနေရာ ကူးရတာလေ။ အဲဒီအချိန်မှာ အင်ဂျင်စက်ကဖောက်ပြီး ဒုက္ခရောက်တော့မလိုဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ တခါလည်း မိန်းမီးခလုတ်ထဲမှာရေဝင်ပြီး အင်ဂျင်ကအလုပ်မလုပ် ဖြစ်ပါလေရော။ အဲဒါကြောင့် ကုန်သယ်ပို့မှုစာချုပ်ပါအတိုင်း မလုပ်ဆောင်နိုင်လို့ ပေါင်ငါးရာလောက် လျော်လိုက်ရသေးဗျာ။
တကယ်တော့ ကျုပ်ရဲ့ MGB1087ဟာ ဒီလိုဖောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျ။ ကျုပ်တို့ ဝယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ကျုပ်ရောဟော် စကင်ပါ စက်တွေအားလုံး တကယ့်ကိုစနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာ စက်တခုခု ချယွင်းမှုဖြစ်လာလိုက် ကျုပ်တို့ နှစ် ယောက်စလုံးက စက်တခုလုံးကို အိုဗာဟောလုပ်ပြီး ပြန်ပြင်ကြတာ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ မကြာခဏ ဒုက္ခပေးနေပြီ။ အ ကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ဒုက္ခပေးနေသလိုမျိုးပေါ့။ ဒီကောင်မကြီးကြည့်ရတာ စိတ်မပါ့တပါ ဖြစ်နေသလိုမျိုးဗျ။
ကျုပ်သိပါတယ် ကျုပ်သိပါတယ်။ သင်္ဘောတစ်စင်းကို အသဲနှလုံးမရှိဘူးလို့ စိတ်မပါဘူးလို့ မနှိုင်းယှဉ်အပ်ဖူးဆိုတာ ကျုပ် သိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားတာဖြစ်နေရတာခံနေရတာ ဘယ်နှယ့်ဖြစ်ပါ့လိမ့်။ ကျုပ်တို့ အလုပ်က အချိန်လုပြီး မောင်းရသွားရတာလေ။ အဲဒီအချိန်မှာ သင်္ဘောက မိန်းမကြီးတစ်ယောက်လို စိတ်မပါသလို မလုပ် ချင် မကိုင်ချင်သလို ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ပြဿနာရှာနေသလို ဖြစ်နေတော့တာကိုး။ အဆိုးဆုံးကြုံရတာကတော့ လာမင် တန်မြစ်အဝင် အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတုန်း စက်ကဖောက်ပြီးတော့ ပျက်သွားပါလေရော။ တဖက် ပြင်သစ် ဆိပ်ကမ်းက မခွာခင်ကတည်းကပဲ။ ဒီတခါ ပို့ဆောင်ရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းက အထူးအရေးကြီးသတဲ့ဗျို့။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်ရန် ခက်ခဲတဲ့ကုန်မျိုး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့၊ ဒါပေ မယ့် ထုံးစံအတိုင်းက ကျုပ်ကလည်း ကုန်ပစ္စည်းတင်တင်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်မဝင်စားပဲ နေခဲ့တာကို၊ နောက်ဆုံး ပြဿနာဖြစ်မှ ကျုပ်သိရတာချည်းပဲ။ အင်ဂျင်ကရပ်သွားတော့ ရေစီးထဲမှာ ကျုပ်တို့က မျှောနေတာ။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတာ သုံး နာရီလောက် ကြာတယ်ဗျ။ နောက်ဆုံမှရပြီး ကမ်းကပ်နိုင်တော့တယ်။
ကမ်းရောက်တာနဲ့ တပြိုင်တည်း ဟော်စကင်ကပြောတယ် …။
“ကမ်းရောက်တာနဲ့ ပဲ့ကိုင်စနစ်ကို ပြင်ဖို့ ကျုပ်တို့သွားမယ် လိုအပ်ရင်လန်ဒန်ထိ သွားရင်သွားရမယ်”
ကျုပ်က အထိတ်တလန်ဖြစ်ပြီး …
“ပဲ့ကိုင်စနစ်က ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဖြစ်နေတာ အင်ဂျင်တွေဗျ”
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြင်းခုန်လေသံနဲ့ပြောတာ။ အဲဒီတော့မှ ပဲ့ကိုင်ဘီးရဲ့ ဟောင်းလောင်းအပေါက်ထဲမှာ တခုခုထည့်ထား ဝှက်ထားလို့ရတာကို ကျုပ်ပြေးပြီးသတိရမိ တော့တယ်။ ကျုပ်က …
“ကျုပ်ကို ဘာလို့မပြောတာတုန်း အထဲမှာဘာထည့်ခဲ့တာ”
ဟော့စကင်က စိတ်မရှည်တော့သလို …
ကျုပ်ကစစချင်းတော့ ဟော်စကင်က နောက်ပြီးပြောနေတယ်မှတ်လို့။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းပဲ အလင်းရသဘောပေါက် သွားတယ်။
“ဘုရား ဘုရား ခင်များဆိုလိုတာက ဘိန်းတို့ ဘိန်းဖြူတို့လား”
ဟော့စကင်က ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်၊ သူ့ကြည့်ရတာ ကျုပ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ ပေါက်ကွဲမလဲဆိုတာ တွေးစနေပုံရတယ်။ ကျုပ် ရဲ့ လောဘအရှိန်ကိုလည်း ချိန်စနေပုံရတယ်။ ဒါကြောင့်သူက မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ၊ ဒီပစ္စည်းက တန်ဖိုးလည်းကြီးတယ် ကျုပ် တို့အတွက် အမြတ်အစွန်း အများကြီးလည်းရနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျုပ်အာမခံတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကျုပ်တို့နှစ်ယောက် စကားအကြီးအကျယ်များကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့မှတ်မိသလောက်ကတော့ ကျုပ်တို့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျုပ်က ဒေါသတကြီးကန့်ကွက်မိတာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲမှတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကျုပ်က စိတ်အရမ်းဆိုးနေပြီးလေ။ ဟော်စကင်ဟာ ဒီမှောင်ခိုလုပ်ငန်းမှာ ဘယ်သူကဘာပြောပြော အဆုံးအစ မရှိ ခရီးဆက်မယ့်သဘောရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ကျုပ်ကနောက်ဆုံး ဒီအလုပ်ကထွက်မယ်လို့ ပြောဖြစ်သွားတယ်။ ဟော့ စကင်က …
“အဲဒီလိုထွက်လို့ မရဘူးလေ။ ခင်များ ဒီအလုပ်အားလုံးကို အပ်ကျမတ်ကျ သိနေတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ ဒါကိုခင်များမမေ့နဲ့”
ကျုပ်ကမနေပါဘူး။ ချက်ချင်းပဲ …
“ဒါပေမယ့် မူးယစ်ဆေးဝါးကျတော့ အရမ်းကိုလွန်လွန်းလာပြီဗျ”
“အခုမှလာပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေပြောမနေနဲ့။ ကျုပ်တို့အလုပ်က ဝင်ငွေတွေကောင်းခဲ့တာပဲ။ တချိန်လုံး ဘာမှမပြောပဲနေ ခဲ့ပြီးမှ”
အဲဒီလိုပြောရင်း ကျုပ်အနားကို တိုးကပ်လာတယ်။ ဟော်စကင်ဟာ ဟိုတုန်းကလို လူငယ်သေးသေး သူ့ကိုယ်သူ မယုံကြည် တဲ့သူ မဟုတ်တော့ပဲ ခုတော့ အကောင်ကြီးကြီး လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာပြီး ကျုပ်ကိုသူ့လက်ထဲက လွှတ်ချင်ပုံမရတော့။
ဟော့ စကင်က …
“မနှစ်တုန်းကလည်း ခင်များအတွက် ဝင်ငွေတွေအများကြီး ကောင်းခဲ့တာပဲ။ အခုမှတော့ တောင်တောင်အီအီတွေ လျှောက် တွေးမနေနဲ့တော့။ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံး ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာ လည်ပင်းထိနစ်အောင် ရောက်နေကြပြီ၊ ဆက်နေကြဖို့လည်း ရှိတယ်။ ….ကဲပါ ကဲပါ လက်ကိုင်ဘီးဖြုတ်ဗျာ”
ဒီတစ်ကြိမ်ဟာ ကျုပ်ကန့်ကွက်စကားပြောမိတာ နောက်ဆုံးအကြ်ိမ်ပါပဲ။
ဒီနောက်တော့ အခြေအနေတွေက ဆိုးသထက်ဆိုးလာတော့ ဟော်စကင်က လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရသလို ဖြစ်သွားပြီး အဆုံးစွန်ထိလုပ်တော့မယ့်သဘော ဆောင်လာတယ်။ ဒီအန္တရာယ်ကြီးလှတဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာ သူက ဆရာကြီးပဲလို့ ပြချင်ပုံရတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ကျုပ်အပေါ်မှာလည်း ဆရာကြီးပဲလို့ ပြချင်ပုံရတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းလတွေမှာ ကျုပ်တို့ ဒီလောက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပြောကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး။
မူယစ်ဆေးဝါးဆိုတာ ကျုပ်တို့သယ်ပို့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အသေးဖွဲဖြစ်သွားတယ်။ တခါတရံမှာ လူဆိုးလူမိုက်တွေ သယ်ပို့ရတာ တွေလည်း ရှိလာတယ်။ တခါလည်း ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ပုံရတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ထိန့်လန့် ကြောက်ရွံ့နေပုံရတဲ့ မိန်းခလေးငယ်နှစ်ယောက်ကို သယ်ပို့ရတယ်။ တခါလည်း သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အခေါင်းတစ်ခေါင်းသယ်လာရပြီး ဆိတ်က သရင်း အငူထိပ်ရောက် ပင်လယ်နက်ထဲကို ချပစ်ရတယ်။ တခါလည်း ပတ်စ်ပို့မရှိ နိုင်ငံမဲ့ ဂျူးတွေကို သယ်လာရပြန်တယ်၊ ဆောင်သင်သမ် ကမ်းခြေထဲရောက် ဂျူးတွေလည်း ဆိပ်ကမ်းပေါ်တတ်သွားရော ရဲတွေလက်ထဲ တန်းတိုးတာပါပဲ။ အဲဒါကို မြင်ရလို့ ဟော်စကင်က …
“သူတို့ကုန်ကျရတဲ့ ငွေကြေးတွေက အလကားဖြစ်သွားရပြီပေါ့”
ကျုပ်က ဟော့စကင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး သယ်လာတာလည်းသူပဲ၊ လက်တို့လိုက်တာလည်း သူပဲနေမှာပဲလို့ အတွေး ပေါက်နေမိတယ်။ ဒါတွေ ဒါတွေဟာ ကျုပ်တို့ ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာ ဖေါ်ပြနေသလိုပါပဲ။ တိုက်ဆိုင်မှုလားတော့ မပြောတတ်ဖူး။ MGB1087 ကလည်း စိတ်ချမ်းသာပုံမရဘူးဗျ။ စစ်အတွင်းကာလက ကျုပ်ရဲ့သင်္ဘော MGB1087 က အလုပ် ကောင်းကောင်း စွမ်းရည်ကောင်းကောင်း မပြချင်တော့ဘူး၊ အမျိုးမျိုးအကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ဖောက်လာတော့တာပဲ။ ဘာမ ဟုတ်တာလေးနဲ့လဲ ဖောက်ချင် ဖောက်လာတတ်တယ်။ အကြောင်းကြီးကြီးမားမားနဲ့လည်း ဖောက်ချင်ဖောက်လာ တတ် တယ်။ သူ့ကို မောင်းရ ပြင်ရတာလည်း အရင်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး။ သူ့ကို ခိုင်းရ မောင်းရတာလဲ မလွယ်တော့ဘူးဖြစ်လာ တယ်။ သင်္ဘောမောင်းရတာလည်း အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်လာနေတော့တာပေါ့။
အဲဒီတစ်ခေါက်ကို ကျုပ်ကောင်းကောင်း မှတ်မိတာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ MGB1087 နောက်ဆုံး အခေါက်မတိုင်ခင် အဆိုးအဝါး ဆုံး အခေါက်ပဲဗျ။ ကျုပ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါတယ်။
အဲဒီအခေါက်ရဲ့အစက ကျုပ်က ပို့စ်မောက်ဆိပ်ကမ်းမှာ နှစ်ပတ်ကြာအောင် သင်္ဘောပြင်နေရတယ်။ ဟော်စကင်က လန်ဒန် ကနေ လှမ်းဖုန်းဆက်တယ်။ သူက … “သင်္ဘောအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ”
“ကောင်းပါမှဖြစ်မှာ။ နောက်နှစ်ရက်ကြာရင် ဆက်တိုက် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် သွားရမယ့်သဘောရှိတယ်။ အားလုံးအချိန်တိုင်း နာရီတိုင်း လုပ်ကြရမယ်”
“ဒါဆို နားထောင်။ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရဲ့ ဆယ်မိုင်လောက်အကွာမှာ မြစ်လက်တက်တစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒီမြစ်လက်တက် ဟာ နွံထူထပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရေတတ်ချိန်မှာ သင်္ဘောဝင်လို့ရနိုင်တယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိပ်ခံအထိ ကပ်နိုင်တယ်”
ကျုပ်ကမြေပုံထဲမှာကြည့်ပြီး ရှာလို့ရနိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဟော်စကင်က ….
“အဲဒီမှာ ည ၁၁ နာရီတိတိမှာ ကျုပ်တို့လူက စောင့်နေလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုခေါ်ပြီး နောက်တစ်နေ့ကို ပြန်ရောက်လာအောင် မောင်းရမယ်။ တစ်ယောက်တည်း မောင်းလို့ရနိုင်ရဲ့လား”
“ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပဲ ၊ ဒါပေမယ့် အချိန်တိကျဖို့လို့တယ်လို့ ထပ်သတိပေးတယ်”
ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ဘာမှဂရုမစိုက်ဘူး။ ပါးစပ်ကတော့ အချိန်ဘာလို့ တိကျနေရတာတုန်း …ဟော့စကင်က စိတ်ပူတတ်တဲ့ လေသံနဲ့ ….
“အထူးစပါယ်ရှယ်မို့လို့ဗျ။ ကျုပ်တို့အတွက် အကြီးဆုံးရလဒ်အခေါက်ကိုပေးမယ့်အခေါက်ပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်ပြီးရင် ကျုပ်တို့ အနားယူလို့တောင် ရနိုင်ပြီဗျ။ ခင်များစ်ိတ်မဝင်စားဘူးလား”
“ဟုတ်ပြီလေ ကျုပ်ရောက်အောင်သွားပြီး လုပ်လိုက်မယ်”
ဖုန်းခွက်ကိုချလိုက်တယ်။ ကျုပ်က ဟော်စကင်နဲ့ ရယ်ရွန်း ပတ်ရွန်း စကားတွေပြောမနေချင်တော့ဘူး။ မပြောဖြစ်ကြတာလည်း ကြာနေပြီလေ။
MGB1087 နဲ့ နွံတောထိပ် အမှောင်ထုထဲမှာ ကျုပ်စောင့်နေရပါတယ်။ စောင့်နေရင်းတန်းလန်း ချိန်းထားတဲ့အတိုင်း ဟော်စ ကင်က ပေါ်မလာပဲ ရဲတွေများခေါ်လာမလားလို့ ကျုပ်တွေးနေမိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၁ နာရီအတိလောက်ကျတော့ ရှေ့မီးအစွမ်းကုန်ထိုးထားတဲ့ကားတစ်စီး ဝင်လာတာတွေ့ရတယ်။ မီးလာတာနဲ့ ထရပ်ကားတစ်စီးဆိုတာသိရတယ်၊ ထရပ်ကား ဟာ ကျုပ်သင်္ဘောနဘေးမှာ ယှဉ်ရပ်လိုက်တယ်။ ကားပေါ်က လူတစ်ယောက် နှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီး ဟော်စကင်နဲ့ပါ လာတယ်။ သူတို့တွေက ထရပ်ကားပေါ်ကနေပြီး ကုန်သေတ္တာတွေချကာ သေးသေးရှည်ရှည်သတ္တာတွေဖြစ်ပြီး သေတ္တာဟာ ရှစ်လုံးရှိတယ်။ သူတို့တစ်တွေဟာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ကြတယ်။ သေတ္တာတွေမှာ သံကြိုးတွေပတ် ထားတယ်။ စာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဌာနကသုံးတဲ့ တော်ဝင်အမှတ်တံဆိပ်တွေပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေအားလုံးချပြီးတော့မှ ပစ္စည်း ချတဲ့သူက ….“ရှစ်လုံးနော်”
သူတို့အချင်းချင်းဒါပဲပြောတယ်။ ပစ္စည်းချတဲ့သူက ထရပ်ကားပေါ်ပြန်တတ်ပြီး ထွက်သွားတယ်။
ဟော့စကင်က ကျုပ်ဘေးနားရောက်လာပြီး …
“ကဲသွားစို့ ကျုပ်တို့အလင်းရောင် ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ရေလက်ကြားရောက်ချင်တယ်”
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ကျုပ်တို့သွားဖူးတဲ့အထဲမှာ အဆိုးဆုံးပဲ။ ကျုပ်တို့သင်္ဘောဟာ တိုကေးဆိပ်ကမ်းရဲ့ တောင်ဘက် သုံး လေးမိုင်လောက်အကွာ မြစ်လက်တက်တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီမြစ်လက်တက်ထဲကို ကျုပ်တို့ဝင်နေကြ၊ ကျုပ်တို့က ရေလက် ကြားကို အေးအေးဆေးဆေးဖြတ် ပြင်သစ်ကမ်းခြေရောက်ရင် မှောင်ရီဖြိုးဖျဖြစ်မယ်၊ သန်းခေါင်မှာ ချိန်းဆိုထားတဲ့ မြစ်လက် တက်ထဲဝင်ဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေကတော့ ကျုပ်တို့က နှစ်ဆယ့်လေးနာရီလောက်နောက်ကျနေတယ်၊ ကံကောင်း ထောက်မမှ ပြင်သစ်ကမ်ခြေ ချိန်းတဲ့နေရာရောက်ပြီး ကုန်ချနိုင်မယ်၊ စဖောက်တာကတော့ MGB1087 ပဲ၊ ထွက်လို့မှ ဆယ်မိနစ်မရှိသေးဘူး၊ သင်္ဘောပန်ကာကို မှော်ပင်တွေညှိပြီး ရပ်သွားပါလေရောဗျာ။ ကျုပ်တို့လည်း ရေအောက်ကိုဆင်း ပန်ကန်ကြိုးမှာညှိနေတဲ့မှော်ပင်တွေကို ဓါးနဲ့ဖြတ်၊ အားလုံးအချိန် ၂နာရီလောက်ကြာတယ်ဗျ၊ ရေထဲဆင်းငုပ်ရတာတို့ ပန် ကာမှာညှိနေတဲ့ မှော်တွေ ဒိုက်တွေကို ဓါးနဲ့ခုတ်ရဖြတ်ရရှင်းရတာ ကျုပ်ပဲပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဟော်စကင်က ရေထဲကိုမဆင်းနိုင်ဘူးတဲ့လေ၊ ဒါပေမယ့် ဘာပဲပြောပြော သင်္ဘောပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်စောင့်ရတာက အတော်ဂနာ မငြိမ်ဖြစ်စရာပဲဗျ၊ ရေထဲဆင်းပြီး လုပ်ရကိုင်ရတာက တော်သေး၊ ကျုပ်တို့သင်္ဘောက မြစ်လက်တက်ထဲက ကောင်းကောင်း မထွက်ရသေးဘူးလေ။ သင်္ဘောပေါ် အမှောင်ထုထဲထိုင်နေတုန်း မီးရောင် တဝင်းဝင်းနဲ့ကားတစီးဖြတ်လာရင် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုး၊ ဘယ်အချိန်မှာ ကမ်းခြေစောင့်က ဗိုက်ကို သေနတ်နဲ့ချိန်မလားလို့။
ကျုပ်လည်း ဘာကြောင့်များ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖြစ်နေရတာသိချင်တာနဲ့ ဘာတွေတင်လာတာလဲလို့ ဟော်စကင်ကို မေးပါတယ်၊ ဟော်စကင်က …
“ဒါတွေပူမနေပါနဲ့ ကိုယ့်လူရာ ဘာတွေသယ်လာသလဲဆိုတာ ကျုပ်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့သာ ကျုပ်တို့မိလိုက်ရင် ကျုပ်တို့ထောင်ထဲမှာ ဆယ်နှစ်လောက်သွားနေရမှာ၊ ပိုရင်တောင်ပိုအုံးမယ်”
ပြီးတော့မှ ကျုပ်ပြန်ပြီး သတိရသွားမိတယ်၊ စာတိုက်တံဆိပ်အမှတ်အသားနဲ့ သံကြိုးတွေပတ်ထားတဲ့ သေတ္တာရှည်ရှည် ရှစ်လုံးကို ပြေးမြင်ယောင်လာမိတယ်။ ကျုပ်တို့အလုပ်က တကယ့်ကို ရာဇဝတ်အိုး တုတ်ထိုးတဲ့အလုပ်ပါလား။ နောက်ဆုံး တော့ သင်္ဘောပြန်မောင်းလို့ရသွားပါတယ်။ မြစ်လက်တက်ထဲကနေ ရေလက်ကြားထဲ ဝင်လာနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့၊ ရေလက်ကြားက တဆင့် ပြင်သစ် တိုကေး ကမ်းခြေသွားရမှာလေ၊ ကျုပ်တို့ဒီမှာပဲ အချိန် ၂ နာရီလောက်ကုန်နေပြီ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် MGB1087 ဟာ ဒီရေလက်ကြားခရီး ထွက်တာလောက်တော့ အပျော့ပေါ့ဗျာ။ ထွက်လို့မှ ဘာမှသိပ်မကြာသေးဘူး ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒီကောင်မကြီးက အမျိုးမျိုးပြဿနာရှာတော့တာပဲ။ ပြဿနာကအမျိုးမျိုးဗျ။ ဆီယိုတဲ့ပြဿနာကတစ်မျိုး၊ မသန့် တဲ့ဆီကိုထည့်မိတယ်ဆိုပြီး ဂျီးများတာကတဖုံ တလမ်းလုံး ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးပေးတော့တာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ အလင်း ရောင်ပေါ်စမှာ တိုကေးကမ်းခြေကို စမြင်ရပြီဗျ။ ဒါပေမယ့် ချိန်းဆိုထားတဲ့ နေရာကိုရောက်ဖို့ မိုင် ၇၀လောက်ဝေးသေးတယ်၊ အဲဒီမှာ ဖောက်လာပြန်တာဗျို့၊ ကျုပ်လည်း လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်ကို ရှာရဖွေရလုပ်ရတာပေါ့၊ အဲဒီအတွက် အချိန် ၉ နာရီကြာတယ်ဗျ၊ ဟော့စကင်ကတော့ သင်္ဘောမူးနေလျက်(သူမူးနေတာလည်း ကျုပ်ကဘယ်လိုမှ မအောင်းမေ့ ပါဘူး) အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာက ပြင်လို့ရဖို့ မောင်းဖို့ပဲ နောက်ဆုံးကျမှ လက်ကိုင်ဘီးနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဝါယာကြိုး ကဖောက်နေတာ။
တကယ်တော့ MGB1087ဟာ ဒုက္ခပေးတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ကဂျီကဂျောင် လုပ်ပြနေတဲ့ပုံစံမျိုး။
အဲဒီလိုပြောရတာတွေ့ရတာလည်း အူကြောင်ကြောင်တော့နိုင်သား။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာ ဒုက္ခပေးလာတဲ့ အရပ် ရပ်က တည်းက ဒီကောင်မကြီး ကဂျီကဂျောင်လုပ်နေပြီဆိုတာကို ပြနေသလိုပဲ ကျုပ်ခံစားရတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဟော်စကင်ကုန်ပို့ရမယ့်နေရာကို ၂၄နာရီနောက်ကျပြီး ကျုပ်တို့အရောက်ပို့နိုင်ဖို့ ဖြစ်လာတော့တယ်၊ ကျုပ်က MGB1087 ကို လာတိုကေး တောင်ဘက်ဖျားက ကမ်းနားကို ဝင်ကပ်လိုက်တယ်။ ဒါချိန်းဆိုထားတဲ့နေရာပဲ၊ ကမ်းနားက အမှောင်ထုထဲမှာ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတွေနဲ့ မဲမဲလူလေးယောက်ပေါ်လာတယ်၊ အဲဒီလေးယောက်က ဘယ်သူမှ စကားတစ်ခွန်းမပြောကြပဲ သေတ္တာရှစ်လုံးကို သင်္ဘောပေါ်ကချ ကမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ အမှောင်ထုထဲပျောက်သွားတော့ တယ်၊ သူတို့ဆင်းသွားတာနဲ့ ကျုပ်တို့လည်း ဆိတ်ဘယ်လာဒီဘက် ဦးတည်မောင်းလိုက်ပါတယ်။
ရှက်ပြီးသေတဲ့သင်္ဘော – အပိုင်း (၁)
ရှက်ပြီးသေတဲ့သင်္ဘော – အပိုင်း (၂)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဘာသာပြန်ကဏ္ဍ, ရသဆောင်းပါးစုံ, အခန်းဆက်များ, မောင်မိုးသူ